I-Medgard Clinic (Togliatti) ingenye yezikhungo ezimbalwa zedolobha ezihlinzeka ngezinsizakalo zobuchwepheshe emkhakheni we-cosmetology nokuhlinzwa kweplastiki. Ubuhle be-cosmetology buya phambili, futhi unyaka ngamunye inani elikhulayo labantu libhekela ezinsizakalweni zalo, lifuna ukubukeka lincane futhi lizwe kangcono.
Umtholampilo waseMedgard ku-Togliatti udlala indima yinkimbinkimbi yonke ephathelene nokuphathwa nokuxilongwa kwezinkinga ezihlukahlukene zomzimba, ukuvuselelwa nokulungiswa kwayo. Lesi sikhungo sinemibono e-Ulyanovsk naseSamara, imitholampilo yasendaweni nayo isiza izakhamuzi zalezi zindawo ukuba zilethe impilo yazo ngokuhlelekile. Okuthandwa kakhulu yizinsizakalo zokuhlinzwa kweplastiki, okusetshenziselwa inani elikhulayo labesifazane nabesilisa.
Izindlela eziningi ezingasetshenziswayo odokotela besikhungo sezempilo zisenza sikwazi ukungena ngaphandle kokuhlinzekwa okuhlinzayo. Ababhali kanye nodokotela besayensi yezokwelapha basebenza emtholampilo, okwathi emva kokubonisana kokuqala banganquma ngesidingo sokuhlinzwa, futhi banikeze ezinye izinketho ezingenabuhlungu.
Uma ufuna ukuthola ukunakekelwa kwezempilo okusezingeni, thinta "Medgard" (Togliatti). Odokotela besikhungo bayokujabulela ukukusiza. Nsuku zonke I-Gastroenterologists, izazi zezinkinga zegazi, izazi ze-cardiologists, izinzwa zezinzwa zegazi, kanye nezinye izazi - izazi ze-andrologists, urologists, i-proctologists, i-phlebologists kanye ne-endocrinologists baya emsebenzini. Ukusebenzisana okusebenzayo odokotela komunye nomunye kuvumela ukufeza imiphumela ephezulu ekwelapheni izifo zeziguli.
Impilo yabantwana "kwi-Medgard" ku-akhawunti ekhethekile: umtholampilo usethe abasebenzi bonke abachwepheshe abakhethekile abangakwazi ukuxilongwa ngendaba ethile. Uma usuhlela ukuba umama, lapha ungathola iseluleko ngokuphathwa kokukhulelwa nokubeletha. Ingane yakho izonikezwa ukunakekelwa okukhulu kusukela ngesikhathi esifanayo sokuzalwa, uyoba nodokotela wakhe ohlela yonke inqubo yezokwelapha, ecabangela izici zomzimba wengane.
Ulwazi olungcono futhi oluqotho mayelana nomtholampilo i-Medgard (Togliatti) - ukubuyekezwa kweziguli zalo, okuyinto ezimweni eziningi ezihle. Iziguli zangezikhathi ziphawula indlela ekhethekile yezidakamizwa ezama ukuthola ukutholakala kwesiguli, kuyilapho zizama ukwenza konke okusemandleni ukuvimbela lesi sifo ukuba singabuyeli. Ukuqeqeshwa kwabasebenzi kuyinzuzo enkulu emtholampilo, ngokusho kweziguli eziningi, ikakhulukazi abahlengikazi abakwazi ukuhlinzeka ngezokwelapha kuphela ngesikhathi esifanele, kodwa futhi nangokwengqondo.
Izingane ezitholwe esibhedlela emtholampilo futhi zitholwa ukwelashwa zibandakanya othisha abangenayo futhi zithola amamaki ukuze ziqhubeke nezifundo zesikole, okunye okuzuzisa isikhungo. Enye inzuzo yomtholampilo, eyaziwa yiziguli zayo, ingukuthi ingakwazi ukuhlolwa ngokucacile emahoreni ambalwa nje, kuyilapho izoba ngekhwalithi ephezulu kakhulu.
Uma unezifo ezingahle zilungiswe ngosizo lwezinqubo ze-cosmetology, ngokushesha xhumana nomtholampilo "Medgard" (Togliatti), ikheli lakhe: st. Frunze, 10-B. Ukuze ufike kule ndawo yezokwelapha ungasebenzisa inombolo yomzila yebhasi 23, kanye nezinombolo zamabhasi 102, 169 no-326. Umtholampilo ukhona eduze kwekhasi "Isikole No. 51".
Kulula futhi ukusebenzisa izinsizakalo zamatekisi, kodwa lokhu kungabiza kakhulu, ngakho-ke kungcono ukuqala ukukhetha indlela yokuhamba ngokuthutha umphakathi. Uma ushayela imoto yakho, uzokwazi ukufika ku-Frunze Street ngokusebenzisa iBudyonny Boulevard, Stepan Razin Street noBudyonny Prospekt. Kuyikota phakathi kwalezi zitaladi ezine ukuthi umtholampilo ukhona.
Ungathintana kanjani na?
Uma uhlela ukwenza ukuhlinzwa kwepulasitiki ukuze ususe noma yikuphi ukukhubazeka, umtholampilo waseMedgard (Togliatti) uzokusiza, inombolo yocingo yokubhalisa +7 (8482) 999-333 izosiza ukwenza i-aphoyintimenti nomchwepheshe oqondile. Kumele kukhunjulwe ukuthi umtholampilo usebenza kusukela ngoMsombuluko kuya kuMgqibelo ubandakanya, ngakho-ke usizo lokwabelana ngodokotela lwalesi sikhungo akufanele lubalwe.
Yonke iminyango yomtholampilo isebenza emasontweni kusukela emahoreni angu-8 ukuya kwangu-20, ngoMgqibelo - kusukela emahoreni angu-8 kuya kwangu-17, ngeSonto - usuku lokuphuma. Umtholampilo unayo ikhemisi, lapho ungathenga khona yonke imithi edingekayo. Futhi yenza i-aphoyintimenti nodokotela kalula ngosizo lwesayithi elisemthethweni lomtholampilo - Medguard.ru. Ekuvakasheni kokuqala, kufanele uhlale uthatha ipasipoti yakho nawe, ukuze uthole ikhadi lesiguli.
Umtholampilo u-Medgard (Togliatti), ngaphezu kokuhlinzeka ngezinsizakalo ze-cosmetology, ubhekene nokuhlolwa kwezobuchwepheshe nokugoma kwabantu. Futhi lapha ungaxhumana uma kudingekile ukwakha ikhadi le-sanatorium-resort. Uma unquma ukuthola imfundo ephakeme, kodwa awunawo ulwazi lwezokwelapha kwifomu elithi "086-y" ngesizathu esithile, thintana nomtholampilo ngamukeli wakho.
Izikole zokubeletha nezinye izikole zidinga ukuhlolwa kwezempilo okuphoqelekile ngumntwana ukuthi angeniswe esikhungweni sikahulumeni, lokhu kungenziwa nakwaMedgarde. Yiqiniso, ukuhlolwa emtholampilo kuzobiza okungaphezulu, kodwa kuzosindisa isikhathi esiningi. Futhi kulesi sikhungo ungayikhipha incwadi yezempilo, uhlole ukuhlolwa kwezempilo, kanye nekhomishana yezokwelapha ukuthola ilayisensi yokushayela. Ngamazinga anemininingwane ongayithola ekubhaleni komtholampilo.
Ingabe ufuna ukuhlolwa ngokomzimba bese ulondoloza imali? Bese uxhumana nomtholampilo i-Medgard (Togliatti), lapho ukubonisana kokuqala nomchwepheshe kuzokubiza phakathi kwama-ruble angu-300 no-2000. Imali ebiza kakhulu kuyoba ukuhlinzekwa kwepulasitiki kwezigaba ezingu-9 no-10 eziyinkimbinkimbi, kuzobo kuzodingeka ukhokhe ama-ruble angu-53 no-72, ngokulandelana. Kufanele kukhunjulwe ukuthi amanani angashintsha, ngakho-ke izindleko eziqondile zenqubo oyithandayo kufanele zicaciswe ngabaphathi bemtholampilo.
Ngokwehlukana, kumele sicabangele intengo yamasevisi wamazinyo, njengoba aqale emtholampilo maduzane. Ukubonisana okuyinhloko kwedokotela wamazinyo kuleli cala kuyodla ama-ruble angu-400, kuyilapho nje kuhlolisisa, ukuxilongwa nokulungiselela ukwelashwa. Zonke ezinye izinqubo udokotela angakuncoma ngazo ngesikhathi sokuhlolwa kokuqala kuzodingeka zikhokhwe ngokusho ohlwini lwamanani atholakalayo.
Uma uhlela ukuvakashela emtholampilo i-Medgard (Togliatti), kufanele ukhumbule ngokutholakala kwezinzuzo ongazisebenzisa. Ngokuyinhloko, uma uthengi ukubhalisa, uzothola isaphulelo esingu-10 kuya kwezingu-15% ngokuthenga okulandelayo. Kukhona futhi amaphuzu we-VIP, abanikazi bawo abangathola isaphulelo esingu-15% kuwo wonke amasevisi emtholampilo. Uhlu oluningiliziwe lwamathikithi wonyaka kanye nezindleko zabo kufanele kucaciswe ebhalweni.
Futhi, i- "Medgard" inikeza ukusebenzisa uhlelo lwediphozi. Ungayifaka imali ku-akhawunti yakho yokuphumula futhi uyisebenzise esikhathini esizayo ukukhokha noma yimaphi amasevisi emtholampilo. Lolu hlelo lusho ukuthi umndeni wakho ungayisebenzisa, kanye nalabo obafaka kubhaliso olukhethekile. Uma lokhu kungasebenzi kuwe, cabangela ukhetho lokuthenga isitifiketi sesipho sama-ruble angu-3 noma amahlanu, ongabonisa kunoma ubani owaziyo.
Igama lomkhiqizo kanye nekubaluleka kwalo ukuhweba ngempumelelo